बसुन्धरा स्थित कलेज पढ्ने १७ बर्षीय युवतीको भाडाको कोठामा यस्तो काम, रहस्य खुलेपछि छिमेकीनै अचम्मित – Wow Sansar
बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – वास्तविक मनछुने कथा”
Breaking:आज जारी भएको निर्णय अनुसार एक महिना लकडाउन थप गर्ने निर्णय।शहरी क्षेत्रलाइ असर पर्ने,पुरा पढ्नुहोस
अर्काकी श्रीमतीसँग तीन तलामाथि रमाइलो गरिरहेको अवस्थामा युवतीका श्रीमान पुग्दा जे भयो ! -भिडियोसहित
यात्रुहरु लिएर हिँडेको ट्रक दुर्घटना: १७ जनाको मृ’त्यु, २५ घाइते
दोलखा भीमसेनको शीलामा फेरी पनि पसिना आयो, अनिष्ठ हुने संकेत !
यी ४ राशिका पुरुषले पाउँछन् अत्यन्त सुन्दर र असल श्रीमती !
धर्तिमताको कुटिमै पुग्दा यस्तोसम्म देखियो अन्तरबार्ता गर्दा गर्दै एक्कसी के भयो, ढले पत्रकार भिडियो
Breaking:नेपालमै २ लाख नेपालीलाइ रोजगार दिने निर्णय।आवेदन दिने कहिलेसम्म?जानकारी लिनुहोस
बिबिसीका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा १८ वर्षीया सपना
छिटो हेरी हाल्नुस : सियोना श्रेष्ठ नानुको उपचार सफल, नेपाल आउने तयारीमा
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बसुन्धरा स्थित कलेज पढ्ने १७ बर्षीय युवतीको भाडाको कोठामा यस्तो काम, रहस्य खुलेपछि छिमेकीनै अचम्मित
बसुन्धरा स्थित कलेज पढ्ने १७ बर्षीय युवतीको भाडाको कोठामा यस्तो काम, रहस्य खुलेपछि छिमेकीनै अचम्मित
5672minutes read
काठमाडौं । अहिले कोरोनाका कारण पुरै मुलुक लकडाउनमा छ । सबै घरभित्र छन् । सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने र विद्यार्थीलाई भाडामा छुट दिन घरधनीलाई आग्रह गरेको छ । तर राजधानीको बसुन्धरामा भाडामा बसेकी गुल्मीकी एक युवतीलाई घरभेटीले तत्काल कोठा खाली गर्न भने ।
आफुलाई घरधनीले तत्काल कोठा खाली गर्न भनेको कुरा उनले छिमेकीलाई सुनाइन् । बसुन्धाराकै एक कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययानरत ती युवतीलाई घरधनीले एकैदिनमा कोठा छाड्न भनेपछि उनी निक्कै त ना व मा थिइन् । ति किशोरीलाई घरभेटीले अन्याय गरे भन्दै घरभेटीकै छिमेकी उनको वि रु द्ध मा उत्रिए । यस्तो बेलामा उनलाई कोठावाट निकाल्न नहुने भन्दै युवतीको पक्ष लिए ।
तर जब २ वटा कोठा भाडा लिएर बस्ने १७ वर्षीय युवतीको ध’न्दा बारे उनीहरूले छिमेकीले पनि थाहा पाए त्यसपछि उनीहरु पनि अचम्म परे । मासिक ९ हजार भाडा दिनेगरि बसेकी ती युवतीको कोठामा उनकै कक्षामा पढ्ने झन्डै दर्जन विद्यार्थी दैनिकजसो पालैपालो सामूहिक यौ न कार्यमा लाग्ने गरेको खुलेपछि ती युवतीलाई घरधनीले कोठा छाड्न भनेका थिए ।
केही समय पहिलेसम्म ठमेल तथा लेकसाईडका सडक हुदैं झाँ गिएको अ वै ध यौ न व्यवसाय पछिल्लो समय यसरि नाम चलेका विद्यालय र कलेजभित्रसमेत छिरेको घ ट नाले धेरै अभिभावकलाई समेत सोच्न बाध्य बनाएको छ । तर नेपालमा अस्वभाविक रूपमा झाँगिएको अ वै ध यौ न व्यसायको पछिल्लो वास्तविकता भने यही हो ।
सुनसान छन् इलामका पर्यटकीयस्थल
इलाम । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै मुलुककै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य श्रीअन्तु र सन्दकपुरबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य हेर्न स्वदेशी र विदेशी पर्यटक झुम्मिने बेला हो यो । तर इलामको श्रीअन्तु र सन्दकपुरलगायत उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य यतिबेला सुनसान छ । न यहाँ पहिले पहिले यही समयमा लाग्ने पर्यटकको ओइरो देखिन्छ, न त मानिसको भिडभाड ।
इलाम पर्यटकीय क्षेत्रमा उत्कृष्ट गन्तव्य हो । जहाँ मुलुककै उत्कृष्ट पर्यटकीयस्थलमा पर्ने श्रीअन्तुबाट सन्दकपुरसम्म पर्दछन् । जुन गन्तव्यहरु सूर्योदय र सूर्यास्तका लागि अब्बल मानिन्छन् । तर कोरोना भाइरसका कारण भने अहिले पर्यटकको सङ्ख्या शून्य छ । पर्यटकको बाक्लो नै उपस्थिति हुने यस बेलामा पर्यटक नहुँदा सबै होमस्टे र होटल सुनसान छन् ।
पर्यटकीय क्षेत्रहरु कन्याम, श्रीअन्तु, पशुपतिनगर, फिक्कलका साथै सन्दकपुर, पानीटार कुइभिर ढाप पोखरीजस्ता क्षेत्र सुनसान भएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । भारतीय बाटो भएर आउने पर्यटक शून्यजस्तै भएका छन् । वनभोज र भ्रमणमा आएका पर्यटकले भरिभराउ हुने कन्याम सुनसान भएपछि त्यहाँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई हातमुख जोर्न स म स्या पर्न थालेको छ । कन्यामका होटल सञ्चालक टेकराज गिरीले पर्यटक आउन छोडेको एक महिनाभन्दा बढी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना स ङ्क्र म णको जोखिम बढेसँगै जिल्लाका धार्मिक गन्तव्य र पर्यटकीय स्थल सुनसान बन्न थालेका छन् । फागुन सुरु भएपछि झुल्के घाम हेर्न र सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि आउनेको ताँती हुन्थ्यो । तर यसपालि सुनसान छ ।”
कन्याममा १०० व्यावसायिक ट्रली–ठेला सञ्चालनमा रहे पनि पर्यटकको चाप घटेपछि १५/२० मात्र सञ्चालनमा रहेको स्थानीय व्यवसायी गोपाल गिरीले जानकारी दिनुभयो । पर्यटक आउन छाडेपछि ठेला व्यवसायीले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर तिर्नसमेत समस्या पर्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् । झुल्के घाम हेर्न र सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि दैनिक हजाराँै पर्यटक पुग्ने अन्तुडाँडा पूरै सुनसान भएको स्थानीय घरवास व्यवसायी रुद्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
कन्याम, अन्तु, फिक्कल बजार, इलाम बजार, सन्दकपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रका होटलसमेत धरासयी बन्ने अवस्थामा पुगेको होटल व्यवसायी सङ्घ इलामका अध्यक्ष देवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पर्यटक नआएका कारण धार्मिकस्थलसमेत यतिबेला सुनसान छन् । कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भएदेखि पर्यटक आउनै छाडेको इलामको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल माइपोखरीका पुजारी तुलाराम पौडेलको भनाइ छ । गत वर्ष इलाममा झण्डै एक लाख पर्यटक इलाम घुम्न आएको भए पनि यस वर्ष भने सो सङ्ख्यामा ह्रास आउने अनुमान छ ।
नायिका काजलले प्लास्टिक सर्जरी गरेर स्त’नको आकार बढाएपछि खिचाएका तस्विर भा,इरल
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं
आज दशैँको दोस्रो दिन, अति शुभ छ यी ७ राशिको भाग्य, तपाईको राशी कुन ?
आफ्नो श्रीमानबाट छुट्टिएर देश आउदाको पिडासङै बदनामी भए गर्ववती महिलाहरु
आँफैले दिएको अन्तर्वातापछी फेरी ट्रोलको शिकार बनिन् कलाकार पूजा शर्मा ! के भनेकी थिइन् ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
8 seconds अघि
42 mins अघि